धुर्मुसलाई दुत्कार्नेहरुका नाममा… – Nepal Press
चितवन रंगशालालाई अर्को मुलपानी नबनाउँ
२०७८ माघ ४ गते ९:२४
काठमाडौं । केही समयदेखि हास्यकलाकार धुर्मुसको अनुहारबाट हाँसो हराएको छ । हास्यरसको कलाकारिताले ख्याति कमाएका उनी वास्तविक जीवनमा ‘करुणरस’ मा पिल्सिएका छन् । उनको दिल–दिमागमा एउटै विषय पिलो जसरी टन्टनाइरहेको छ– रंगशाला ।
जनस्तरबाट सहयोग जुटाएर नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न तम्सिने ‘दुस्साहसपूर्ण अपराध’ गरेवापत् चितवनकै एक ‘क्रिकेटप्रेमी’ ले धुर्मुसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी हालेको समाचार अस्ति बाहिरियो । उजुरीपछि सामाजिक सञ्जालमा देखिएका धेरै प्रतिक्रिया हेर्दा यस्तो लाग्छ, मानौं धुर्मुस देशकै ठूला अपराधि हुन् र उनलाई जेल कोच्न ढिलाइ भइसकेको छ । त्यसो त पहिल्यैबाट प्रहार हुँदै आएका तिखा लाञ्छनाका बाणहरुले ‘अपराधि धुर्मुस’ थिलोथिलो भइसकेका थिए । जेलै जानु पर्यो भने पनि उनलाई योभन्दा बेसी मानसिक पीडा सायदै होला ।
धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको पहलमा चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन क्रिकेट रंगशालाको काम रकम अभावका कारण अवरुद्ध बनेको चार महिनाभन्दा बढी भयो । ठूलो उत्साहका साथ सुरु गरेको महत्वाकांक्षी परियोजनालाई टुंगोमा पुर्याउन नसक्दाको पीडा धुर्मुसलाई भन्दा बढी कसलाई होला ? आपूर्तिकर्ताहरुलाई सामानको उधारोवापत तिर्नुपर्ने १७ करोड रुपैयाँको बोझले उनी निस्सासिने गरी थिचिएका छन् । हरेक बिहान पैसाको ताकेताका लागि बज्ने फोनका घन्टीले ब्युँझदाको सकस उनलाई मात्र थाहा छ । त्यसमाथि, सामाजिक सञ्जालमा आउने अवगालहरुले सुइरो झैं घोप्छन् । राति निदाउन पनि ‘मेडिटेसन’ गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् उनी ।
हो, अहिले अरुसँग पैसा मागेर परोपकार गर्ने कथित सामाजिक अभियन्ताहरु टोलटोलमा उम्रेका छन् । उनीहरुमध्ये कतिले राम्रो काम गरेका छन् त कति बदनाम पनि भएका छन् । कुनै आर्थिक पारदर्शीताबिना हातमा पैसाको बिटो बोकेर सडकमा बाँड्दै हिँड्ने सामाजिक अभियन्ताको म पनि विरोधि हुँ । तर, धुर्मुस त्यो कोटीमा पर्दैनन् । उनले व्यक्तिगतस्तरमा नभएर फाउन्डेसन खोलेर संस्थागतरुपमा काम गरिरहेका छन् । जे–जति काम गरेका छन्, त्यसको हिसाबकिताब दुरुस्त र पारदर्शी छ । अहिलेसम्म सम्पन्न गरेका कुनै पनि परियोजनामा एक पैसा हिनामिनाको आरोप उनीमाथि लागेको छैन ।
रंगशालाको हकमा कुरा गर्दा, म पनि स्वीकार्छु, यस्ता ठूला विकास पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारकै हो । तर, अर्को तरिकाले पनि सोचौं । सरकारले खर्च गर्ने पनि जनताकै पैसा हो । सरकारले जनताबाट राजश्वका रुपमा वर्षेनी उठाउने खरबौं रकम विकासमा खर्च गर्ने मान्यता राखिन्छ । तर, नेपालमा चाहिँ राजश्वबाट उठेको पैसा कर्मचारीको तलबभत्तामै सकिन्छ । अनि विकास–निर्माणका लागि विदेशीसामू हात पसारिन्छ । यदि जनताकै पैसाबाट देशमा एउटा गर्विलो संरचना बन्छ, भने त्यसमा गलत के छ ?
धुर्मुस समाजका एक आदर्श बिम्ब हुन् । यस्ता बिम्बहरुलाई निभ्न दिनु हुँदैन । एउटा धुर्मुस निराश हुनु भनेको उनलाई प्रेरणा मान्ने लाखौं नागरिक निरुत्साहित हुनु हो । अहिलेको चुनौति धुर्मुसका लागि एउटा अग्निपरिक्षासरह छ । उनी सहजै डग्मगाउने मनुवा होइनन् । तर, उनको पनि फलामको मुटु अवश्य छैन । टुट्न सक्छन् । उनी टुट्नु, विरक्तिनु भनेको एउटा राष्ट्रसेवी देशका लागि क्षति हो । यो क्षति जसरी पनि रोकौं ।
प्रकाशित: २०७८ माघ ४ गते ९:२४
18 thoughts on “धुर्मुसलाई दुत्कार्नेहरुका नाममा…”
यथार्थसहितको आलेख पढ्न पाइयो खुशी लाग्यो । नेपाली जनतामा किन अरुको खोइरो खन्ने प्रबित्ति दिमागमा रोग बनेर बसेको छ । यस्तो रोगले आफू बन्ने त कुरै छोडौ अरुलाई पनि बन्न दिदैन । तसर्थ यो बेला धुर्मुस,सुन्तलीलाई सबैको साथ सहयोगको जरुरी छ ।
परदेशी कान्छो। says:
धुर्मुस जस्ता कलाकार समाजसेवीलाई निरुत्साहित गर्न खोज्ने त उपचार गर्न पनि सम्भव नहुने स्तरका मानसिक रोगी हुन्। यो जुनीमा अघोसित पागलको जीवन भोगेर मर्छन्।
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले ठूला पूर्वाधार विकासको परियोजनामा हात हाल्नु हुन्थेन। यो खालको परियोजनामा ईच्छा राखेर प्रक्रिया अघि बढाउँदा राज्यले त्यतिखेर रोक्नुपर्थ्यो। यहाँ फाउण्डेसन र राज्य दुवैको गल्ति छ। रह्यो कुरो क्रकेट रङ्गशाला बनाउन त्यतिखेर फाउण्डेसन दबावमूलक काम गर्नुपर्थ्यो नकि कसैलाई राजनीतिक लाभ पुग्ने गरी प्रयोग। यो यथार्थ हामी भन्न सक्नुपर्छ। तर अझैपनि हामी ठीकलाई ठीक बेठीकलाई बेठीक भन्न सकिरहेका छैनौं। रङ्गशाला निर्माणको मोडल कमजोर भएकाले आज समस्या आएको हो। सुरूमा फाउण्डेसन राज्यको प्रतिद्वन्द्वी जस्तो भएर देखियो अनि हामी जनता पनि भावनात्मक भएर फाउण्डेसनसँग जोडियो। त्यसले हुन्छ कि भन्ने भ्रम धुर्मुस सुन्तलीमा भयो। अहिले आएर पछुताउनु भन्दा पनि राज्यलाई निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न दबाव बढाउनु पर्छ। आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्ने दायित्व धुर्मुस सुन्तलीको नै हो। यो जटिलता आउँछ भनेर मैले त्यतिखेर पनि भनेको हुँ, तर विकास निर्माण कार्यको विरोधी भनेर ट्याग लगाइयो।
अपरिपक्व सोच्, श्रोतको व्यवस्थापन विनाको योजना, अति महत्वाकांक्षी (राजनितिक भविष्य पनि) अपेक्ष्या, वस्ती विकास र खेलकुद विकासको लागी गर्नुपर्ने योजनाको लागी सामाजिक र आर्ठीक पाटो छुट्टै हो भन्ने खुट्याउन नसक्नु, यस्ता वृहत योजना सञ्चालन सरकारी स्तर बाट गर्ने कि व्यक्तिगत स्तर बाट गर्ने भन्ने छुट्याउनु नसक्नु नै कमजिरी रह्यो । देशको भू राजनितिक अवस्था लाई पनि ध्यान दिएको भए नेपालामा ठुलठुला योजनाहरु किन ढिला हुन्छ वा तुहिन्छ भन्ने कुरोको जवाफ पाइन्थ्यो । लेखमा सबैखाले कम्जोरी र जवाफ पनि पढ्न पाइयो । जय होस ।
Durga Prasad kadariya says:
सुरुवात भएकै छ अब स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारले केहि पहल गर्ला आखिर जस्ले बनाए पनि आम खेल प्रेमीलाई त चाहिएको रंगशाला न हो । जे होस हिम्मत गरेर धुर्मुस सुन्तलीले सुरुवात गरेर पनि सम्पन्न गर्न कठिनाई पर्यो । अब बाकि कामको लागी राज्यले दायित्व लिएर काम गरोस
Prem krishna rajbhandari says:
लेखक लाई धेरै धेरै धान्यबाद यो लेख्नु जरुरि थियाे। मानिसकाे देश र जनताप्रितकाे भाबनालाई उजागर गरि देश बनाउन अाहुति दिएकाे याैदा लाई म नमन गर्छु। याे एउटा च्यालेन्ज हाे तर यसमा नेपालिकाे खुट्टा तान्ने प्रबिति र गलत कुदृिस्ट र राजनैतिक नीति बाट गलह्यत्याउन खाेजिएकाे छ । हामी 15% नेपालिले बुछाै बाकिका सबै फटाहा,र अन्य हुन जसले अरुकाे भलाे हुने काम साेच्दैनन् ।याे रंगशाला बन्नु पर्छ जसरि पनि बन्छ भन्ने मेराे िबश्वास छ ।सबैमा मेराे शुभकामना र धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन परिबार प्रति मेराे प्रगाड माया ।
तपाईकाे भलाे चिताउने मान्छे ।
BR Baral says:
सहानुभूतीपूर्ण लेख राम्रो लाग्यो तर घांटी हेरेर हाड़ निल्नु पर्छ भन्ने सन्देश जानुपनि त्यतीकै जरूरी छ । फेरी सबैले आ-आफ्नो काम गर्ने हो नी ।
बास्तबमा मागेर समाजसेवा हुदैन। कलाकार लाइ कलाकार बन्न देउ। हैसियत नभएको धुर्मुस सुन्तली ले आटे पछि यस्तै हो। उनीहरुलाई लाग्यो भावनात्मक भएपछि जति पनि पैसा उठ्छ अनि आफ्नो मन मर्जी ले पैसा चलाउन पाइन्छ। सक्छौ भने रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्धोग खोल कम्पनि खोल नाफा कमाउ अनि जे गरेनी गर। नत्र तिम्लाई सुहाउने कलाकारिता हो उतै जम।
यु ट्युब मा गएर हेर डाँका लेखनु भन्दा पहिला । भो कृषि युनिभर्सिटी को जग्गा हो । यो पछि भत्किन्छ यहाँ नबनाऊ अन्तै बनाऊ भनेर भनेको धेरै भिडियो छन्। खुबै जान्ने सुन्ने भाको डाम्ना ।
मैले ५० करोड भन्दा उठाउ सक्दैनन् त्यसैले यस्ताे काममा हात हाल्नु हुँदैन भनेकै थिएँ सामाजिक सञ्जालमा । ३अर्ब सानो रकम हुँदै होइन।
धुर्मुस सुन्तली जस्ता कलाकार समाजसेवीलाई निरुत्साहित गर्न खोज्ने मनोरोगी हरु धेरै छन् हाम्रो देश र समाजमा, आफु भने सिन्को नभाँच्ने अरुले गरेको राम्रो कामलाई खोट लगाउने। यस्ता तल्लो स्तरका मानसिक रोगी हुन्।
देश र जनताले राम्रो सँग चिनेको छन् कलाकार द्वयलाइ ।तर राजनैतिक बिकराल सोच राख्ने नेता र तिनका धुपौरे कार्यकर्ता को मनोदशा मा पेलिन पुगेका हुन् धुर्मुस सुन्तली।अब सरकारले रंगशाला निमार्णका को लागि बजेट उपलव्ध गराएर धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशन द्वारा नै निर्माण गरियोस् । अन्यथा कमिसन खाने चक्कर मा निर्माण अन्य ठेकेदार लाइ दिन राम्रो होइन।
राजेन्द्र ढकाल,मोरङ,मधुमल्ला says:
नेपाली राजनितिको खराब असर पर्यो,जब सम्म बिकास र अन्य राजनिती बाहिरका बिषयमा राजनितिक दाउपेछ आग्रह पुर्बाग्रह हावी हुन्छ कुनै क्षेत्रमा पनि अपेक्षाक्रीत बिकास हुनै सक्दैन
उद्धब पौडेल says:
भेडा नेपालीको बुद्धि र बिबेक भएको भय त बारम्बार घुष्याहा र भ्रष्ट नेताहरुलाई जितायर देशको यो हालत बनाउने नै थियनन नि ।। यो सतिले सरापेको देश हो , राम्रो गर्नेको भलो हुदैन ।।
Chhabi Sharma says:
अपरिपक्व सोच सहितको भरतपुर नगरपालिकासंगको सम्झाैता । कार्यान्वयनमा पनि केही अपरिपक्वता । जब श्रोतको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्ने भनेपछि धुर्मुस सुन्तली अाफै अगाडि बढ्नु नै एउटा अपरिपक्व सोच भएको देखिन्छ । अर्कोतिर नगरपालिकाले श्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसकेमा जुन रूपसम्म बनेको हुन्छ हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था हुदाहुदै धुर्मुस सुन्तली श्रोत संकलनलाइ अगाडि अाउनु नपर्ने हो । तर यस्ता स्थितिलाइ त्यसबेला सामान्य मानिएकोले पनि अहिलेको समस्या अाउन सकेको हुनसक्छ । तर जतिसुकै विवेचना गरिएपनि कुराको चुरो भने नगरपालिकाको जिम्मेवारीमा निहित रहेको छ ।अहिले पनि नगरपालिकाले अाफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेमा निर्माण अगाडि बढ्न सक्छ ।
Shiva Ram Neupane says:
Developmental infrastructure economic opportunities
So many things can be achieved through one VISION.
Thake Mero aaula Ani saabda haru
Sapanaka sabai mitha Aassharu
छत्र खड्का says:
एकदमै महत्त्वपूर्ण लेख मलाई लाग्छ हाम्रो देशमा 5%मात्रै कहि गर्न मैदानमा उत्रिने मान्छे छ्न भने लगभग 45%मान्छे आफू सिन्को नभाच्ने तर गर्नेको खुट्टा काट्ने तर नाममा शिक्षित भनिएका मान्छे छन भने करीब 50%मान्छे गरिबी र अशिक्षाको भुमरीमा पिल्सिएका मान्छे छन।केही मान्छेहरु अफवाह फैलाउनमा माहिर छन भने केही कुनै सोच बिचार र अध्ययन नगरी त्यसी अफवाहलाई शिरोपर गरि हिड्ने तर धुर्मुस सुन्तली यस्ता मान्छे हुन जुन नेपाली समाजले अपबादमा बाहेक पाउदैन।यदि नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने यस्ता अपबादहरुलाई सुरक्षित राख्न जरुरी छ।
Riddi Karki says:
यो लेख पढे मैले पनि र यो लेख सग म पुर्णरुपमा सहमत छु हो हामी जनता वास्तवमै भेडो छौ केही गर्न खोज्नेलाई हरेक नभएका प्रमाण बिना बोल्छौम र गाली गर्छौ तर सरकार पाटिका नेताले खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार गर्दा मेरो पाटी ठिक छ भन्दै हिड्छौ र तर धुर्मुस सुन्तलीले हामी सवै हिसाब किताब सार्वजनिक गर्छौ भनिरहेका छन तर केही फटाहा हरुले भ्रष्टाचार भयो भनेर मिडियाबाजी गरिरहेका छन प्रमाण बिना यस्तालाई के भन्ने हो हिसाब किताब सार्वजनिक भए पछि चित्त नबुझेमा प्रस्न गर्न सकिन्छ तर यहा त एक किसिमका बिकास बिरोध र यदि धुर्मुस सुन्तलीले काम छोडे हामी कमिसन खान पाउछौ भनेर कोकोहोलो गरेका हुन र अब बाकी काम तीन तहकै सरकारबाट रकम छुट्याएर काम धुर्मस सुन्तली फाउन्डेसनलाई गर्न दिने हो भने रंगशाला समयमै र गुणस्तरको बन्छ । र धुर्मुस सुन्तलीलाई के भन्छु भने हिम्मत नहार्नुहोस नबिराउनु नडराउनु किन टेन्सन लिनु कुकुर भुक्तै गर्छ भुक्न दिनुहोस …
छ्त्र थापा says:
लेखले हामी जस्तो आम मानिसहरुको धुर्मुस सुन्तली र फाउन्डेसन प्रति र तेस्तै प्रकृतिका अन्य ब्यक्ति – ब्याक्तित्व प्रतिको असन्तुलित बिचार र दृष्टिकोणलाई उजागर गर्ने र आफ्नो अनुहार पहिले ऐनामा हेरेर अरुको मुल्यांकन गर्न सुझाएको मैले पाँए !
समय सान्दर्भिकताले अपरिहार्य ठहर्‍याएको लेखको लागि लेखक साधुबादका पात्र बन्नु भएको छ !
बस्तु परिस्थितिको उचित र समग्र मुल्यांकन बिना आरोपको लागि आरोपको मात्र आधारमा धुर्मुस – सुन्तली लाई दन्डित गर्ने कार्य ले समयले हामीलाई पनि झनै महा-अपराधबोध को सामाना गर्नु पर्ने तुल्याउन सक्छ ! सबैलाई चेतना भया: !